Waad ku mahadsantahay inaad ka qeyb qaadanaysid sahankeena caalimiga ah oo ku sabasaan Xaaladaha Nolosha ee Dumarka Reer Miyiga Survey
Waad ku mahadsantahay inaad ka qeyb qaadanaysid sahankeena caalimiga ah oo ku sabasaan Xaaladaha Nolosha ee Dumarka Reer Miyiga
Waad ku mahadsantahay inaad ka qeyb qaadanaysid sahankeena caalimiga ah oo ku sabasaan Xaaladaha Nolosha ee Dumarka Reer Miyiga. Surveyga(Baadhista) Noocan oo kale ah waxay ahayd markii ugu horaysay we ay qaadaan Associated country women of the world (Ururka Hablaha ee aduunka) sanadkii 1935. Waan ogsoonahay in ta ugu adagi tahay inla maqlo Codka Dumarka miyiga waxaan arintaasanu rabnaa inaa badalno. Xogta laga helo Baadhistan waa la soo Gudbin loona sharxi doonaa dadka siyaasada aduunka Gacanta Ku haya,waxa sidoo kale lala lala wadaagi Qaybna Ka noqondoona ururada aan dawliga ahayn(NGO's)
Fadlan isku day kana jawaab su'aal kasta oo Ku jirta Baadhista - waxay kugu qaadan doontaa 25 daqiiqo meelahaas. Qaar kamid ah Su'aalaha lasoo gudbiyay waa su'aalo Shaqsi ah waxaana laga yaabaa in aanad isku dayin inaad Ka jawaabto. Hadii aanay wanaagsanayn ama aadan rabin inaad kajwaabto Su'aalahaas, waad iska dhaafi kartaa. Su'aalaha Halkan aan kusoo gudindoonaa waxay nasiin doonaan xaalada aad Ku nooshahay sida daraadeed daacadnimadaada waan kugu mahadnaqaynaa fikradahaagana waa la tixgalindoona.
.Baadhistan waxa laga qaadi doonaa dad khibrad iyo Aqoon u leh ilaalinta tayada, Xogtaadana iyo jawaab waxa la galin meelo lagu kalsoonyahay sidoo kale magacaagana waa la qarin doonaa Shaqada dhexdeeda. Marnaba kuma waydiin doona magacaaga iyo tixracaaga. Hadii aanad rabin inaad Baadhista dhamaystirto waad joojin kartaa markasta. Hadii aad Ku faraxsantahay inaad sii wado fadlan akhri warbixinaha ogolaashiyaha kana jawaab su'aalala.
Ogolaansho la wargeliyeey: waan aqbalay inaan fahmay sababta ay muhiim u tahay in laqaado Baadhistan si caawimo ahna waan kaga qaybqaadan doonaa. Waxaan fahmay inaan dooran Karo ma dhamaystirayo Baadhista hadii aanan doonayn inaan Ka qaybqaato, Xuquuqdaydayda inaan daahsoonaado iyo Ku kalsoonidaba waa la ixtiraami doonaa.
. Aad baad ugu mahadsan tahay ka qeyb qaadashada. Haddii aad rabto inaad faafaahin dheerad heshid, fadlan soo booqowww.ifrw.org.uk